banaadir – Page 55 – Banaadir Times
Home Articles posted by banaadir (Page 55)
By banaadir 20th May 2021 No comment
Waxaa lagu wadaa in Magaalada Muqdisho uu ka furmo Shirka wadatashiga Arrimaha doorashooyinka, kaas oo ay ka qeyb galayaan Madax uu horkacayo Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda xilgaarsiinta, Madaxda Dowlad Goboleedyada iyo Guddoomiyaha Gobolka Banaadir. Shirka oo loo qorsheeyay in uu furmo Maanta oo khamiis ah, hayeeshee waxaa muuqata inuu dib u dhici doono, maadaama inta
Burcad dhanka Internetka ah oo dhacay ganacsatada Soomaalida Kenya
Guddiga gancsatada Soomaalida ee magaalada Nairobi ayaa aad uga walwalsan kooxo burcad dhanka Internetka ah, kuwaas oo maalmihii la soo dhaafay lacag badan ka dhacay soomaalida ku nool dalka Kenya. Xubnaha Guddiga suuqa Islii ayaa ugu baaqay bulshada Soomaalida inay ka feejignaadaan burcadda Internetka. Arrintan ayaa imaanaysa kumanaan qof oo ku nool magaalada Nairobi ay
Magacyada Golaha Wasiirada Cusub ee Jubbaland
Madaxweynaha Dowlada goboleedka Jubaland Axmed Maxamed Islaam ayaa xalay Magaacabay xubnaha Cusub ee Golaha Wasiirada maamulkaasi. Sida ku cad liiska golaha wasiirada ee cusub waxaa inta badan xilalkooda waayay wasiiradii horey xilalka u hayay,halka wasiirada qaarkood wasaaradaha loo kala wareejiyay. Magacaabidda golaha wasiirada maamulka jubbaland ayaa qaadatay muddo ku
By banaadir 19th May 2021 No comment
Xukuumadda Turkiga ayaa iska fogeysay in ay mas’uul ka tahay falalka lagu eedeeyay ciidamada ay u tababartay dowladda Federaalka ee Soomaaliya, kadib cabasho ay dhawaan u gudbiyeen siyaasiyiinta mucaaradka. Ciidamada sida gaarka ah u tababaran ee Haramcad iyo Gorgor oo uu soo carbiyay Turkiga ayaa lagu eedeeyay in ay awood xad-dhaaf ah u adeegsadeen mucaaradka […]
Diyaar garoow ka socda Muqdisho & Maamul goboleedyada oo kusoo wajahan
Diyaar-garowgii shirka wada tashiga Arimaha Doorashooyinka Qaran ee u dhaxeeya Dowladda Federaalka & Madaxda Maamul goboleedyadda oo lagu balansan yahay in uu maalinta bari ah ka furmo Magaaladda Muqdisho ayaa laga dareemayaa Magaalada Muqdisho. Guddiyadda farsamada oo maalmihii u danbeeyey oo dhan ku hawlanaa diyaarinta shirwaynaha Qaran ee Arimaha Doorashooyinka